#Askari Somali-Maraykan ah oo loo haysto dilka haweeney Australian ah - Get Latest News From Horn of Africa
#Askari Somali-Maraykan ah oo loo haysto dilka haweeney Australian ah
By axadle On Jul 18, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Mogadishu(AxadleTM)— Askari ka tirsan ciidamada Booliska magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa toogasho ku diley haweeney u dhalatay wadanka Australia xilli ay taleefan ugu sheegtay ciidamada Booliska inay halis dareentay.
Askariga dilka geystey ayaa la sheegay in uu yahay muwaadin Somali-Maraykan ah oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Nuur. Askarigan ka tirsanaa ciidamada Booliska Maraykanka oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Nuur ayaa dhowr xabadood ku dhuftay Ms Damon doo 40 jir ah,afaafka hore ee gurigeeda xilli saq dhexe ay ahayd. Qareenka Maxamed Nuur ayaa qiray in uu rasaasta dishey Ms Damond ay ka dhacday qoriga Maxamed Nuur.
Hase yeeshee labadii askari oo saarnaa gaari ayaa mid kamid ah oo la sheegay inuu ahaa Maxamed Nuur uu rasaas ku ridey haweeneydan isagoon hubsan balse lama oga sida uu sharciga Maraykanku ka yeeli doono.
Ciidamo badan oo Boolis ah ayaa toogasho ku diley dalka Maraykanka sanadihii la soo dhaafay dhalinyaro madow ah kuwaasoo intooda badan la sii daayay kadib markii wax dambi ah lagu waayay.